Imifino Ekhula Ngokushesha Engadini Yakho - Imifino
Imifino Ekhula Ngokushesha Engadini Yakho
Ingadi ingaba inqubo ehamba kancane, nesineke. Imvamisa kungcono ukuthi ungayisheshisi.
Kulabo bethu abangathola ukubekezela kancane kwesinye isikhathi, kunemifino ekhula ngokushesha. Le mifino ilungele izingane, ezijwayele ukuba nezikhathi zokunaka eziphansi kunathi sonke - kepha uma ungumlimi ongenasineke (njengami), khona-ke lokhu kuzoba kuhle kuwe ukwengeza nasengadini yakho.
Nayi imifino emikhulu eyisithupha ongayitshala uma ufuna ukuvuna engadini yakho ngokushesha:
Izinsuku ezingama-21 zemifino yezingane
I-Arugula iyi-classic yesaladi futhi ingenye yemifino yesaladi ethandwa kakhulu etshalwe ezingadini ezweni lonke. Ine-flavour ehluke ngokuphelele, enamakha engeza i-punch kunoma iyiphi isaladi noma isidlo.
ekhaya ishiya wax kit
Eyaziwa nangama-rocket noma i-roquette, ikhula ngokushesha futhi kube lula kusuka enzalweni futhi ingatshalwa cishe kunoma iyiphi imvelo - izitshali zamafasitela, iziqukathi, umbhede wensimu ophakanyisiwe, noma uqonde emhlabathini ngaphandle.
Uma ufuna ukusheshisa inqubo ngisho nangaphezulu, thatha okunye ukuqala esikhungweni sendawo yakho engadini.
Funda ukuthi ungakhulisa kanjani i-arugula
Thenga imbewu ye-arugula
Isithombo 'Cherry Belle
Izinsuku ezingama-22 zezimpande ezibomvu eziyi-1 1
I-Radishes ingesinye sezitshalo zezimpande ezikhula ngokushesha kakhulu futhi zisetshenziswa ezingadini ezisanda kuqala ngaso sonke isikhathi ngenxa yesikhathi sazo sokushesha sokuvuna.
UCherry Belle ama-radishes uhlobo oluvame kakhulu - ama-radishes ayindilinga, abomvu owabona kwivenkile yangakini - ngenxa yejubane lawo lokuvuna.
hlobo luni lwe-bra okufanele ngilugqoke
Uma unesineke esithe xaxa, khetha enye yezinhlobo ezikhula esimweni sezulu sasebusika futhi unesikhathi eside sokuvuna.
Funda ukuthi ungakhulisa kanjani ama-radishes
'I-Black Seeded Simpson' ulethisi
Izinsuku ezingama-28 kusuka enzalweni kuye etafuleni
Ulethisi uza ngezinhlobo ezimbili eziyinhloko - iqabunga elixegayo neliphethwe. Izinhlobo ezinamakhanda zifaka phakathi i-iceberg kanye ne-romaine, kuyilapho ulethisi onamaqabunga axegayo afana ne-‘Salad Bowl ’noma i-‘Black Seeded Simpson’ ekhula njengeqoqo lamaqabunga futhi kulula kakhulu ukuyikhulisa.
Futhi ziyashesha, ngakho-ke uma ufuna ukuwina okusheshayo kusuka engadini yakho, hamba nezinhlobonhlobo zamaqabunga axegayo.
Funda ukuthi ungatshala kanjani ulethisi
Thenga imbewu yeSimpson emnyama
Izinsuku ezingama-35-40 zemifino yengane
Isipinashi luhlaza oluhle olwenza ukwengeza okuhle kuma-smoothies, amasaladi, amajusi, noma njengohlangothi lwengcezu enhle yamaprotheni.
Inenzuzo eyingqayizivele yokukhula kahle ngisho nasezindaweni ezinomthunzi, ngakho-ke uma ukhula elangeni elimpofu noma endaweni enethunzi, isipinashi wukuluhlaza kwakho. Ingakhula kahle emahoreni amathathu nje okukhanya kwelanga ngosuku.
kungani u-justin bieber no-selena gomez behlukana
Funda indlela yokutshala isipinashi
Ubhontshisi 'Wokulwa' Bush
Izinsuku ezingama-49 zebhontshisi ezinde eziyi-6-8
Ubhontshisi uyisisekelo esivandeni esiningi (futhi uma kungenjalo, kufanele kube njalo). Izimo eziningi kakhulu ekhishini, le mifino ekulula ukuyitshala cishe yenza ingadi ingabi namandla.
Zama ubhontshisi obucijile noma bezintambo uma ufuna ubhontshisi osheshe ukhule, onobunzima obuncane. Zikhethe ngaphambi kokuba imbewu ngaphakathi kwama-pods ivuthwe.
Funda ukuthi ungatshala kanjani ubhontshisi
Thenga ubhontshisi we-'Contender 'Bush
Ama-Peas we-'Shukela Ann '
Izinsuku ezingama-56 zophizi onoshukela no-2.5 ​​″
Ama-peas we-Snap afanelekile entwasahlobo! Uma usutshalile imbewu yakho ye-pea uzolinda ngokulangazela isivuno sokuqala, lapho ungafaka khona i-pod yokuqala emlonyeni wakho bese unambitha lobo bumnandi obumuncu obenza le mifino idume kakhulu.
Ama-peas we-Snap nawo athandwa kakhulu ngenxa yokuba ngomunye wemifino ongayivuna ngonyaka - ngakho-ke zizame!
Funda ukuthi ungatshala kanjani uphizi
Thenga i-snap pea seed
imvunulo kaheidi klum halloween 2017
kufanele usebenzise i-retinol nsuku zonke
Umnenke we-cosrx mucin ngaphambi nangemva
bekuyini ingoma yokuqala ka-lady gaga